China NO.4 igwe anaghị agba nchara eriri igwe Manufacture na Factory | Huaxiao
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere NO.4 igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Ngwa banyere NO.4 igwe anaghị agba nchara eriri igwe
NO.4 igwe anaghị agba nchara eriri igwe ọtụtụ-eji na mbuli, esulata, kichin na ime ụlọ ịwụ ike
General nkọwa banyere egbu maramara ma ọ bụ leghaara igwe anaghị agba nchara
Nchara nchara nchara nchara dị ka ederede filamentous, nke a bụ naanị teknụzụ nhazi igwe anaghị agba nchara. Elu dị matte, jiri nlezianya lelee elu nke akara ederede, mana enweghị ike imetụ aka. Karịa izugbe na-enwu gbaa igwe anaghị agba nchara na-eyi, na-ese ihe na ọkwa.
Ghichaa igwe anaghị agba nchara kwesịrị ịdị ọcha
Nhicha ma ọ bụ nchacha ncha ga-eme ka nchara igwe nchara dị ntakịrị, na-abụkarị na 0.05 ~ 0.1mm. Na mgbakwunye, n'ihi ahụ mmadụ, ọkachasị nkwụ nwere oke mmanu mmanu na ọsụsọ na-ezo, nchara igwe anaghị agba nchara na-ahapụkarị mkpịsị aka aka doro anya mgbe emetụ aka ma ọ bụ ahụ mmadụ, ọkachasị nkwụ nwere mkpụmkpụ siri ike na ọsụsọ. , ya mere na-achọkarị ọcha dị ọcha n'oge.
Indzọ dị mma iji gbanye ma ọ bụ na-ehichapụ NO.4 igwe anaghị agba nchara
Ka ọ dị ugbu a, igwe anaghị agba nchara gụnyere ụzọ dị n'okpuru: igwe egweri, egweri egweri, egweri mmiri, egweri mmanụ na nsonaazụ ka mma, na ọdịdị nke ndị mmadụ afọ ojuju, ka ọ dị ugbu a ọ dị oke ọnụ
Tụlee banyere NO.4 HL na NO.8 igwe anaghị agba nchara brushing ma ọ bụ egweri
Igwe anaghị agba nchara leghaara eriri igwe ma ọ bụ mpempe akwụkwọ bụ a nkịtị ngwaahịa na ahịa, e nwere ọtụtụ obere ma ọ bụ ogologo akara kpuchie dum igwe anaghị agba nchara eriri igwe ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. Igwe enyo 8K bụ otu ihe ahụ dị ka enyo enyo. Igwe anaghị agba nchara lechara bụ mmetụta nke matte belt nhazi, nhazi dị mfe na ngwa ngwa. Ma enyo enyo nke 8K chọrọ ihe karịrị akụrụngwa asatọ, nke mbụ bụ aja na-adịghị mma, wee kpochapụ ebili nke akara akara na usoro ndị ọzọ iji mezue mmetụta enyo ahụ, enyo ahụ siri ike karịa, yana ọ dịkwa mma ụfọdụ dị iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche
Nke gara aga: 430 ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Osote: BA igwe anaghị agba nchara